The Sun Oo Qortay Inay Sii Kordheyso Cabsida Laga Qabo Mustaqbalka Tababare Antonio Conte Ee Chelsea & Sababta Ugu Wacan - Laacib.net
The Sun Oo Qortay Inay Sii Kordheyso Cabsida Laga Qabo Mustaqbalka Tababare Antonio Conte Ee Chelsea & Sababta Ugu Wacan
Wadahaladii qandaraas cusbooneysiinta ee tababaraha Chelsea Antinio Conte ayaa joogsaday, taasoo sii kordhineysa cabsida laga qabo mustaqbalkiisa sida ay qortay jariirada Ingariiska ka soo baxda ee The Sun.
Macalinka Chelsea ayaa la filayay inuu saxiixo qandaraas cusub oo mushaharka loogu kordhinayo ka dib markii uu kooxda u qaaday horyaalka Premier League xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee England.
Laakiin weli qalinka kuma duugin heshiiska. Jariirada The Sun ayaana tilmaamtay mid ka mid ah caqabadaha hortaagan heshiiska ayaa ah haddii uu helay qandaraas afar sanno cusub ah oo uu sannadkii qaadanayo 9.6 milyan ginni ama qandaraas ka waqti yar.
Doonista Conte ayaa sarre u kacday ka dib markii uu ku guuleystay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee Stamford Bridge. Si kastaba, waxaa laga sheegayaa inay ku sii kordheyso farxad la’aantiisa la xiriirta kooxda.
Tababaraha Talyaaniga ayaa la rumeysan yahay inuu ka careysan yahay sida ay Blues u wajahday suuqa kala iibsiga xagaagan.
Chelsea ayaa la soo wareegtay daafac dhexe ee Jarmalka Antonio Rudiger, goolhayaha keydka Willy Caballero iyo xiddigii khadka dhexe ee Monaco Tiemoue Bakayoko oo shalayto ku yimid heshiis 40 milyan ginni ah.
Laakiin Conte oo u waayay saxiixa Romelu Lukaku kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United ayaa weli raadinaya weeraryahan cusub oo uu ku adkeeyo kooxdiisa.
Xiddig kale oo Conte diirada u saarnaa, daaficii Juventus Leonardo Bonucci ayaa shalayto dhameystiray ku biiritaankiisa AC Milan heshiis 37 milyan ginni ah.
Waxaana jira warar sheegaya in dalabkii ugu danbeeyay ee Chelsea ay ka gudbisay daafaca garab ee Juventus Alex Sandro ee ahaa 61 milyan ginni in la soo diiday.